musha » Blog » Nhungamiro yeProform Treadmills
The ProForm treadmill brand brand inobudiswa neCONON Health and Fitness. ICON Health and Fitness ikambani inobva kunze kweUtrh inotarisa pamichina yekugadzira zvinhu. ICON Health & Fitness inove nezvimwe zvinhu zvakawanda zvekare zvinyorwa zvinosanganisira nhamba yeNordicTrack, Healthrider, uye Freemotion. Iwe uchaona kuti zvikwata zvepreadmill kubva pane maruva ose zvakanyatsofanana kana iwe uchifananidza mienzaniso kubva pane marimi ose.
Izvo ProForm zita rekodhi rakabudirira zvikuru mumakore mashoma akapfuura. Vakapfuurira zvakanyanya zvokuti ProForm treadmill ndiyo inozivikanwa pasi peBoston Marathon. Ita mupfungwa kunyange zvazvo pane zvakawanda zvakasiyana zvezvinyorwa zvepakati pezita iri. Kubudirira kwavo, kusagadzikana, uye mutengo zvakasiyana zvikuru.
ProForm ine mitsetse yakasiyana-siyana yeTTMX. Simba Rinobuda rine zvinyorwa zvinotenga $ 2016 kusvika $ 999. Kunyanya kuwedzerwa kunowanikwa muPore Series uye neBoston Marathon Series asi idzi zvikwata zvichatora mari. Boston Marathon Treadmills ndiyo ProForm inonyanya kushandiswa kwemichina. Izvi zvinoreva vatambi vanomhanya kwemaawa nenguva.
ProForm Marathon Treadmills
Marathon treadmills ndiyo inodhura zvikuru ProForm. Izvo zvine simba uye zvinogadzikana zvakakwana kuti zvitsigire mamiriyoni emamiriyoni emamiriyoni. Zvinosanganisira mapurogiramu ekudzidzira marathon kune vanotanga kuwedzera kune vatambi vepamusoro. Vadzidzisi ve Boston Marathon Treadmill vanogona kutarisana nekugadziriswa kwekugadziriswa, kuenderera mberi kwekutenderera nekuderera, nekuwedzera-kureva mavhidhiyo mavhidhiyo ayo akafananidzwa muBoston race course. Ikushanda kunoratidzwa pane 10 "ruvara rwekanyoro.
Mhando dze 2 ndiyo Boston Marathon Treadmill 3.0 uye Boston Marathon Treadmill 4.0. I4.0 ine SpeedRing teknolojia. SpeedRing isimba-free-free control rinoshandisa maBluetooth.
Proform Thinline Treadmills
ProForm inogadzira mahwendefa eudhipatimendi. Dhipatimendi rezvinyorwa zvinyorwa ndiwo ProForm Thinline uye ProForm Thinline Pro. Izvi zvigadziriswa zvigoni zvinogona kushandiswa nekombiyuta yako kana kombiyuta.
Kusiyana nematafura akawanda, rimwe nerimwe ProForm desk treadmill ine pamba huru uye yakazara nezvinhu zvinosanganisira kurega / kutsemuka, 30 ku40 workout apps, uye iFit technology.
Proform Sport Series Treadmills
ProForm Sport Series inogutsa vanhu vachitsvaka zvigadzirwa zvekushandisa zvinodhura. Mazhinji ematokari aya 60 "kureba uye imwe neimwe yezvinyorwa zvinonzi SpaceSavers. A SpaceSaver treadmill inogona kuiswa pasi kuti iwedzere nzvimbo yepasi. Iyo Proform Sport Series treadmills ine maxium inotenderera ye12% uye iFit inobatsira. IQit membership iyo inotengeswa zvakasiyana. Iko motokari yezvikwereti izvi zvinokonzera 2.75 kusvika 3.5 HP.
Proform Performance Series
The Proform Performance series inosanganisira zvikamu zvakawanda. Iko motokari pamakamuri aya anobva ku2.0 kusvika ku2.75 CHP. Zvikwata zviri mumakwikwi ekushanda zvinowedzera izvo zvinobva ku 10-12%.
Zvinyorwa pazvikwata izvi ndezvishoma kuti inowedzera pakupedzisira Proform mhando. Zvizhinji zvezvikwata zvekushanda kwemashoko ndezve 55 "yakareba. Izvi zvinyorwa zvinogona kubva kubva ku $ 400- $ 800. Kazhinji waranti yezvikwata izvi gore rimwechete zvikamu uye gore rimwe rekushanda.
Proform Power Treadmills
Iyo ProForm Power Series treadmills ndiyo imwe nhanho kubva kuChete Series. Zvinyorwa zvinotarisa zvinotarisa, asi zvivimbiso ndezvakare. The Simba 1495 inotungamirira Simba Rokutanga. Inotsika uye inopera, 10 "touchscreen, 34 inowanikwa mumapurogiramu ekudzidzira uye kusina mwoyo kushamba kwekuongorora. Zvikamu zvemashoma mashomanana ekugadzirisa masimba zvakaputirwa kwemakore 5. Inotengeswa pasi pe $ 1500, iyo Power 1495 iri pakati pezvinhu zvakanakisisa ProForm maitiro evanhu vese vekumba treadmill shopper. Chimwe nechimwe chezvinyorwa zvinowanikwa mumakwikwi emagetsi zvine 3.0 kana 3.5 CHP motokari, iyo yose 20 "x 60", uye 15% inotenderera inotsvaga. Rimwe nerimwe remasimba ezvinyorwa zvisi-yakagadzirira.
ProForm Pro Series inonzi Proform inotungamirira teknolojia kunze kweMarathon treadmill lineup. Kune 4 treadmills munyaya dzino. Ma motori eproform Pro series anobva ku3.5 kusvika ku4.25 CHP. Zvimwe zvinotevedzana zvinyorwa zvinyorwa zvinowedzera kutenderera kwe15% kuwedzera kune -3% inoderera. Izvi zvinyorwa zvinowanikawo iFit inobatana. Iko inodhura yakawanda inowanikwa mumutambo weP Pro ndiyo Pro 900 treadmill. Iyo Pro 900 treadmill ichangobva kugadziriswa ye2016 uye inoisa 10 "screen-screen.
Chinhu chakanaka pamusoro pePurform ndechokuti vanopa zvinyorwa zvepamusoro kuti zvikwanise chero bhajeti. Mitengo inobva ku $ 399 kusvika ku $ 3999. Kana iwe uri munhu anomhanyira, iwe unogona kusarudza muenzaniso wekutanga kana chimwe chinhu chinonatswa. Nyaya dzakawanda dzeProform treadmills dzinogona kuiswa. Zvigadzirwa zvePurform zvitsva zvitsva zvakanyatsogadziriswa kuti dzisafuratira. Mamwe emhando dzakakodhura kunyange kukubvumira kuti udzivirire kukanganisa kuenzanisa kunze kwekudzidzisa. Proform service warranties inopesana ne ton. Chikwata chemarathon chinogona kuvhara chikamu kusvika kumakore e6. Dzimwe hutano hwehutano hwemari asi hunouya chete nehurumende yebasa 90-day kuitira kuti uve nechokwadi kuti unoita basa rako rechikoro usati wasarudza kutenga Proform treadmill.
January 2016 Drugstore $ 15 Dhora $ 75 Mitemo yeVatengesi Vatsva Yakakodzera 1 / 31 / 16
Pedometer Deal: 20% Kure Pedometers kuSportsOnline